Mafetiraiza embanje | MyWeedSeeds.com
Zvirimwa, sevanhu, zvinoda zvinovaka muviri kuti zvisimukire zvakanaka uye kukura zvine mutsindo. Feteraiza saka yakakosha mukuwedzera kuchengetedza zvicherwa zviri muvhu zvakaenzana, kuitira kuti zvirimwa zvinopihwa zvinovaka muviri zvese zvinodiwa mudanho rega rega.
Fomura Flora ndiyo sarudzo yakanakisa yekuwedzera nekuti inoumbwa nehupfu hwakatsindirwa. Fetereza mazhinji anotengeswa ari mvura uye nekudaro anorema uye akaoma kutakura. Fomula Flora inova mvura nekuwedzera mvura.
Formula Flora iri nyore kwazvo kushandisa uye inouya ne "Monkey proof" yekuraira bhuku. Iwe unogona kusarudza kubva pakutangisa ZVESE MUMWE pakiti kune iyo BOOST inosimudzira. Yakakurudzirwa kwazvo kune hutano uye ine simba zvirimwa!
Dzvanya apa kuti ushanyire: formulaflorafertilizers.com